गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्दा दुबै पार्टीका कार्यकर्ताले धोका दिएनन् । गठबन्धनले दुईतिहाई नजिक सिट जित्यो । त्यसपछि पार्टी एकता भयो । दुई अध्यक्ष बने । केन्द्रीय पदाधिकारी पनि टुंगियो । सरकारमा सहभागी हुने कुरामा पनि खासै विवाद भएकोजस्तो देखिएन । अध्यक्षद्वयले ठूलो जहाज हाँक्न दुई पाइलट आवश्यक रहेको हल्का तर्क गरे । तर, को सिनियर पाइलट, को चाहिँ को–पाइलट भन्ने थाहा भएन । यद्यपि, ठिकै ढंगमा अघि बढ्दै थियो । जब जिल्ला, प्रदेश र जनवर्गीय संगठनमा भागबण्ड मिलाउन पर्ने बेला आयो, तब दुवै पूर्वपार्टीलाई ‘पिसाबको पहिरो’ भएको छ ।
देशैभर पार्टी समायोजन तनाग्रस्त भइरहँदा सिन्धुपाल्चोकको एउटा गाउँपालिका–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चमा भएको घटना रोचक छ । दुवै पार्टी एक भएपछि बलेफी गाउँपालिका–काठमाडौं सम्पर्क मञ्च बन्यो, नाममा नेकपा झुण्ड्याइयो । तर, केहीदिन अघि सम्पर्कमञ्चले काठमाडौंमा एउटा कार्यक्रम गरेछ । ब्यानर नेकपाको, तर पूर्वएमालेवाला पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई थाहा नै नदिई । मञ्चमा भने जिल्लाका दामी राजनीतिक खेलाडीका रुपमा चिनिएका एक पूर्वएमालेका नेता देखिन्थे । उनीबाहेक पूर्वएमालेका कोही थिएनन् । अतिथि पनि पूर्वमाओवादीका, सहभागी पनि पूर्वमाओवादी मात्रै । यो कुराले पूर्वएमाले वृत्तमा ठूलै विवादको रुप लियो । लिइरहेको छ ।
यो त एउटा सामान्य घटना मात्रै हो । यस्तो प्रवृत्ति देशैभर मौलाएको छ । पूर्वमाओवादी नेकपामा कसरी जबरजस्ता हाबी हुने ? भन्ने रणनीतिमा छ । पूर्वएमाले गुटभित्रको रस्साकस्सीमा मस्त छ । नेपाली राजनीतिमा चरम तरल जनमत भएको पूर्वमाओवादी र ठोसप्रायः पूर्वएमालेको संगठनबीचको समायोजन वास्तवमै चुनैतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
माओवादी संसदीय राजनीतिमा आएको पृष्ठभूमि र एमाले आएको पृष्ठभूमि फरक छ । जसकारण दुबै पार्टीका कार्यकर्ताको सोच, शैली र व्यवहार मिलाउने कुरातर्फ नेतृत्वले खासै ध्यान दिएको छैन । प्रशिक्षण त धेरै परको कुरा सामान्य सूचना आदानप्रदानमा पनि अहिले नेकपामा समस्या भएको छ । यसले दुई पार्टी समायोजनालाई निकै अप्ठेरो पार्ने निश्चित छ । सरकार सञ्चालनका मामलामा देखिएका तिता सत्यहरु त आमकार्यकर्ता र जनतामाझ छर्लङ्गै छ ।
पछिल्ला घटनाक्रमले संकेत गर्छ कि, मानिसहरुले पहिला गरेको शंका सत्यमा परिणत हुने त होइन ? कतै नेपालमा कम्युनिष्ट सिध्याउन कसैले खेलेको चालबाजीमा एमाले–माओवादी एकात भएको त होइन ?